Korintofo II 11 NA-TWI - Paulo ne atoro asomafo - Mewɔ anidaso - Bible Gateway
Korintofo II 10Korintofo II 12
Korintofo II 11 Nkwa Asem (NA-TWI)
11 Mewɔ anidaso sɛ, sɛ meyɛ nkwaseade koraa a, mubegye me. Mepa mo kyɛw, monyɛ saa. 2 Metwe mo ho ninkunu sɛnea Onyankopɔn twe mo ho ninkunu no. Mote sɛ ɔbaabun a, mahyɛ ɔbarima baako pɛ bi a, ɔno ne Kristo no bɔ sɛ mede mo bɛma no aware. 3 Misuro sɛ wɔbɛsɛe mo adwene na mo a mode mo ho nyinaa ama Kristo no, mubegyae sɛnea Ɔwɔ no nam anifere so daadaa Hawa no. 4 Mode anigye gye obiara a ɔba mo nkyɛn bɛka Yesu foforo a ɔnyɛ nea yɛka ne ho asɛm kyerɛ mo no di; mugye honhom no ne asɛmpa a nsonoe da ɛno ne Honhom ne Asɛmpa a yɛka kyerɛ mo no ntam no di.